po - Synonyms of po | Antonyms of po | Definition of po | Example of po | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for po
Top 30 analogous words or synonyms for po
ဆေးဝါးဗေဒ a. ကလိုရိုကွင်းပြီးသော ရှုတ်ထွေးခြင်းမရှိသည့် ငှက်ဖျား = Quinine sulfate 600-650 mg PO x 5-7 days (Children = 8-10 mg/kg PO TDS x 5-7 days) + Doxycycline 100 mg PO BD x7days
ဆေးဝါးဗေဒ 221. Fluconazole (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှို ရောဂါဆေး၊ အာခေါင်မှို၊ အစာမြိုပြွန်မှို၊ မွေးလမ်းကြောင်းမှို၊ ဦးနှောက်မြှေးမှို၊ Children PO / IV6to 12 mg/kg/day; C. meningitis 12 mg/kg on first day, followed by6mg/kg/day (or 12 mg/kg/day based on medical judgment of patient's response) Fluconazole (0.1 g) 0.1–0.2 g daily; Fluconazole (0.2 g) (Diflucan); Fluconazole (Diflucan IV) 0.2–0.4 g မှိုကြောင့် ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Adults PO / IV 400 mg first day, followed by 200 mg every day (400 mg may be used) for 10 to 12 wk; မှိုကြောင့် အစာမြိုပြွန်ရောင်ခြင်း၊ Adults PO / IV 200 mg first day, followed by 100 mg every day thereafter for minimum of2wk; Children PO / IV6mg/kg on first day, followed by3mg/kg every day thereafter for minimum of2wk မှိုကြောင့် ဆီးလမ်း-ဝမ်းတွင်းရောင်ခြင်း၊ Adults Daily doses of 50 to 200 mg; မွေးလမ်းကြောင်း မှိုဝင်ခြင်း၊ Vaginal Candidiasis Adults PO 150 mg single dose;
ဆေးဝါးဗေဒ 140. Clindamycin (0.3 g) (Cleocin, others) 15 mg/kg; Clindamycin (Cleocin, others) 2400 mg စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ Clindamycin: Adult 150-300 mg PO q8h; 300-600 mg IV q8h; Pediatric 25-40 mg/kg/d PO/IV divided tid အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတုရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ အဆုပ် ပြည်တည်ခြင်း၊
နဂါးသွဲ့ ရှုပ်ထွေးသော ကယ်လ်စီယမ် ဒြပ်ပေါင်းပုံစံဖြစ်သည်။ ဖလိုရင်း ပါဝင်နေသော ကယ်လ်ဆီယမ် ဖော့စ်ဖိတ် ဒြပ်ပေါင်း Ca(PO)(F) နှင့် ကလိုရင်း ပါဝင်နေသော ကယ်လ်ဆီယမ် ဖော့စ်ဖိတ် ဒြပ်ပေါင်း Ca(PO)(Cl) တို့၏ ပုံဆောင်စနစ်မှာ ဆဌဂံစနစ် (Haxagonal System) ဖြစ်သည်။ သိပ်သည်းဆ ၃.၂ ရှိပြီး မာဆင့် ၅ ရှိပါသည်။ ဖန်ရောင်လက် ဖြစ်ပြီး အလင်းပေါက် (Transparent) အဖြစ် အပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်၊ မရမ်းရောင် စသည်ဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။
ဆေးဝါးဗေဒ 336. Minocycline: Adult 100 mg PO/IV q12-24h; Pediatric 2-4 mg/kg/d divided bid အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု စသည်တို့ ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
ဆေးဝါးဗေဒ 169. Dicloxacillin 1 Gm QID အရိုးတွင်းပြည်တည်ခြင်း၊ Adult 500 mg PO q6h; Pediatric 25 mg/kg/d divided q6h အရေပြားနာ၊ အရေပြားရောင်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတုရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
သိန်းတန်၊ တွံတေး တွံတေးသိန်းတန်သည် သီချင်းရေးသား သီဆိုခြင်း ဝါသနာအရ ဆရာဦးသန်းကြွယ်၊ တပ်မတော်(ရေ)မှ PO ဦးသန်းမြင့်၊ ဂီတာသိန်းစိုး၊ စန္ဒရားမောင်မောင်အေး၊ မောင်မောင်လေးတို့ထံမှ ဂီတပညာကို ဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၅၆-ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုမှ တေးသီချင်း တစ်ပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာ ၁၉၆၀-၆၁-ခုနှစ်က ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်သီဆိုခဲ့သော "မျက်ရည်စမ်းဖြင့် ခမ်းလေပြီ" သီချင်းဖြင့် ဂီတနယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဘမောင်ချိန်၊ မစ္စစ် မစ္စစ်ဘမောင်ချိန်၏အမည်ရင်းမှာ ကလယ်ရီဘဲလ်အိုင်ရင်းဖိုး (Claribel Irene Po) ဖြစ်သည်။ သူသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဘမောင်ချိန်၏အမည်နှင့်ပင် ထင်ရှားခဲ့သည့် ပထမဆုံး ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၌ ပါဝင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီးဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ပုသိမ်မြို့တွင် ဒေါက်တာစံစီဖိုးနှင့် ဒေါ်အေမီလူနီတို့မှ ၁၉၀၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မစ္စစ်ဘမောင်ချိန်သည် ကရင်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မွေးချင်းခုနစ်ဦးအနက် ပဉ္စမမြောက် ဖြစ်သည်။
ပိုလိုနီယမ် ပိုလိုနီယမ် () (ဓာတုသင်္ကေတ- Po)သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလွန်ရှားပါးသော semi-metal ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တုန့်ပြန်မှုအားကောင်းပြီး ငွေမှင်ရောင်ရှိသည်။ အက်စစ်ပျော့များတွင် ကောင်းမွန်စွာ ပျော်ဝင်နိုင်သော်လည်း အယ်လ်ကာလီ (alkalis)များ တွင်မူအနည်းငယ်မျှသာလျှင် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်း သည် အသင့်အတင့် အငွေ့ပျံနိုင်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်ပါဝင်သောပျော်ရည်များသည် (အလုံပိတ်ထားသော ခွက်ထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိလျှင်) ၃ ရက်လျှင် တစ်ဝက်ခန့် အငွေ့ပျံသွားနိုင်သည်။